Shaakala Afaan Oromoo kana itti of ilaali -
Barumsa afaan Oromoo Shaakaluuf As Tuqaa
Hubachiisaa!! jechoonni baruumsa kana keessatti itti gargaaramne garri tokko kan Taammanaa Bitimaa ti
Kabajamtoota daawwattootaa fii dubbistoota marsaa kanaa baga dhuftanii dhihaadhaan simannaa teenya ta duraa haa taatu. Sabni tokko akka sabaatti kan ittiin beekkamu keessa inni guddaa Afaan fii Aadaa isaati. Yoo Afaan kun hin jiraatiin aadaan isaas hin jiraattu. Eeenyummaan isaas hin jiraatu. Nu hundi kanarratti waliif galla. Eega irratti walii gallee hoo Afaan Kana guddisuufii jiraachisuuf maal godhuu qabna? Gaafiin un deebisaa hunda keenyaa fedha……
….Yoo beeyte barsisi yoo hin beeyne immoo baradhuu dhaloota dhufitti dabrsi…….
Akkuma biyyiti Oromoo bal’oo fii guddoo Afaan Oromoos Afaan Sooreessaa fii heddommina jechoota isaa hamma ammatti namni irraa gahe saffaree hin jiru. Kanaaf baruumsa yertuu tana keessatti isa dhageenye hamma tokko yoo walitti himnee wal barsiifne hegeree Afaan kanaa tiif xiqqaatullee bu’aa qaba janna. Kanaaf kunoo, bilisummaa.com bifa ammayyattiin akka namatti tolutti jechoota Afaan Oromoo kan hiikkoo walfakkatu qaban kanaan baruumsa Afaan Oromoo kana Eegalla.
Yoo dogoggorri hojjanne si afaan bu’e, takkaa yaada keenya caalu qabaatte, yookaa barsiisuu barbaadde waliin malee kopha kophaa fiiyne gar tokkollee hin geenyuu amanta ta’e bakkee teessee nu qofarratti hin laalinii hirmaadhu!!
Tags afaan oromoo moggoyyoolee qubee shaakala
Previous Tens of Ethiopians demonstrating in front of the United Nations High Commissioner Sixth of October refusing to build a “Renaissance Dam”
Next ‘No Nile, no Egypt’, Cairo warns over Ethiopia dam…